Kuuriyada Waqooyi Oo Sheegtay Inay Tijaabisay Gantaal Cusub | Gaaroodi News
Kuuriyada Waqooyi Oo Sheegtay Inay Tijaabisay Gantaal Cusub
March 26, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Pyongyang ayaa soo bandhigtay sawirradii ugu horreeyay ee gantaalka
Kuuriyada Waqooyi ayaa warkii ugu horreeyay ee ay soo saartay kaddib tijaabada gantaalka ku sheegtay in gantaalladii ay tijaabisay shalay ay yihiin “nooc cusub”.
Waa tijaabadii ugu horreysay ee dalkaasi uu sameeyay ku dhowaad sanad kadib iyo markii ugu horreysay tan iyo intii uu Joe Biden noqday Madaxweynaha Mareykanka.
Mr Biden ayaa sheegay in Mareykanka uu “jawaab ku habboon” ka bixin doono. Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koofureed ayaa cambaareeyay tijaabadaas.
Sida ku xusan qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Pyongyang waa ka mamnuuc inay tijaabiso gantaalladan oo kale.
Warka ay maanta soo saartay Kuuriyada Waqooyi waxaa lagu sheegay in labada gantaal ay jareen masaafo dhan 600km (373 meyl) oo loo ganay dhanka xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, tan oo beenineysa warkii Japan ka soo baxay ee ahaa in gantaallada ay keliya jareen 400km.
“Horumarinta hubkan wuxuu muhiim u yahay xoojinta quwadda milatariga alka iyo iska caabbinta dhammaan khataraha milatari,” ayuu yiri Ri Pyong Chol, oo ah hoggaamiyihii sare ee goobjoogga ka ahaa tijaabada. Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ma uusan joogin.
Sida ay sheegtay Pyongyang, gantaalka cusub wuxuu awoodaa inuu qaado ilaa 2.5 tan oo hub ah taas oo suurtogal ka dhigeysa inuu qaado madaxda nukliyeerka.
Falanqeynta weriyaha BBC-da: Maxay tahay sababta ay haatan Kuuriyada Waqooyi hub u tijaabineyso?
Ma jirto jawaab fudud. Ugu horreyn, sababtoo ah way awoodaan, Pyongyang waxay haysataa hub cusub oo ay dooneyso inay tijaabiso.
Balse farriimihii dhowaan ee uga digayay Mareykanka inuusan abuurin rabshad isla markaana maamulka Biden uu “u aayi doono” ayaa muujinaya in Kuuriyada Waqooyi ay dan leedahay.
Hay’adda sirdoonka Kuuriyada Koofureed ayaa sheegtay inay rumeysan tahay in Kuuriyaa Waqooyi ay tijaabada hubkeeda cusub ku soo aaddisay shirkii jaraa’id ee Madaxweyne Biden. Waxay sidoo kale sheegtay in Pyongyang ay ka duuleysay musaafurintii muwaaddin u dhashay dalkaas, Mun Chol Myong oo laga musaafuriyay Malaysia lana geeyay Mareykanka, iyo qaraarkii dhowaan ee Golaha Xuquuqda Aadanaha Qaramada Midoobay ee ka dhanka ahaa Kuuriyada Waqooyi.
Wax walba oo ay sababtu noqoto, farriinta ay Kuuriyada Waqooyi u direyso adduunka aad ayay uga duwan tahay tan ay u direyso shacabkeeda.
Bogga hore ee wargeyska ay dowladdu leedahay waxaa ku sawiran Kim Jong-un oo ka soo degaya basas cusub oo rakaab ah – ee kuma sawirna isaga oo horkacaya tijaabada gantaallada cusub.
Mr Kim wuxuu cududda milatarigiisa ku fidinayaa adduunka balse wuxuu isku dayayaa inuu bixiyo sawir ah nin isbeddel dhaqaale u keenay dadkiisa.
Madaxweyne Biden ayaa weriyeyaasha u sheegay in tijaabada gantaalka ay meel uga dhacayso heshiiska Qaramada Midoobay isla markaana uu Mareykanka arrintaas kala tashanayo saaxiibbadiis iyo xulafadiisa. Warbaahinta dowladda ayaa soo bandhigtay janaraallada Kuuriyada Waqooyi oo u sacbinaya tijaabada gantaalka
Ma cadda nooca dhabta ah ee gantaalka ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dowladda ee KCNA ayaa sheegtay inuu yahay “nooc la casriyeeyay oo ah matoorka shidaalka oo adag”.
Balse tijaabadan waxay muujineysaa horumarka uu dalkaas ka gaaray barnaamijkiisa hubka tan iyo intii ay dhicisoobeen wada hadalladii joojinta horumarinta nukliyeerka ee Kim uu la yeeshay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in gantaallaan ay yihiin isla kuwii lagu soo bandhigay dhoollatus milatari ee bishii October ka dhacay Pyongyang